गाईको दुध बच्चाको लागि हानिकारक, कसले खाने कसले नखाने ? | Diyopost
गाईको दुध बच्चाको लागि हानिकारक, कसले खाने कसले नखाने ?
मा प्रकाशित 356 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, माघ २३ । नेपाली परम्पराअनुसार गाईको दूध अमृतसमान मानिन्छ । गाईको शुद्ध दूधबाट क्यान्सरजस्ता भयानक रोगसमेत निको हुने वैज्ञानिक तथ्य छ । गाईको दूध मात्र नभएर दही, घिउ, पिसाब र गोबरसमेत उपयोग गरिन्छ । हिन्दू धार्मिक मान्यताअनुसार गाईको पिसाबलाई गहुँत भनिन्छ, जुन मर्दापर्दा काम लाग्छ ।
गाईको दुधमा न्यून मात्रामा चिल्लो हुन्छ । त्यसैले यो पातलो र कम फिँजयुक्त हुन्छ । गाईको दूधमा ९० प्रतिशतसम्म पानी हुन्छ । जसले शरीरमा आवश्यक पानीको मात्रा पूरा गर्न सहयोग गर्छ । तर, गाईको दुध नवजात शिशुका लागि भने हानिकारक रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । बर्षदिन नपुगेको बच्चालाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गर्ने उनिहरुको तर्क छ । आमाको दूध नआएमा शिशुलाई गाईको दूध खुवाउने गरिन्छ । ठोस खानेकुरा खान नसक्ने बच्चाको लागि गाईको दूध विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
गाईको दुधमा आमाको दूधमा जस्तो आइरन हुँदैन । तसर्थ, एक बर्षभन्दा कम उमेरका बच्चालाई गाईको दुधको मात्र भर परेमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन्छ । त्यसैले आमाको दूध खान नपाउने अवस्था आएमा बच्चालाई गाईको दुधसँगै आइरनयुक्त अन्य खानेकुरासमेत खुवाउँदा केही राम्रो हुन्छ ।
गाईको दुधले नवजात शिशुको श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा असर पुर्याउँछ । साथै, पाचन प्रक्रियामा समेत असर पुर्याउन सक्छ । आमाको दुधमा पाइने जति पौष्टिक तत्व गाईको दुधमा नहुने भएकाले बच्चा कमजोर हुन्छ । त्यस्तै, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत कमी आउँछ । यसका साथै गाईको दूध पिउने साना बच्चामा एनिमिया (रक्तअल्पता) र एलर्जीको खतरासमेत हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
वडाअध्यक्षले फिर्ता गरे ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजु भत्ता
कर्णाली सरकारको बजेट खर्च १० अर्ब : कुन मन्त्रालयको खर्च कत्ति ?
मल अभावले कृषक भारतीय बजार जान बाध्य
मन्दिरको जमिन बेच्ने महन्त निलम्वित, गुठी संस्थानको छानविन शुरु
लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न दवाब
सद्दे गाडी थन्क्याएर संसदीय समितिका सभापतीलाई ११ करोडको नयाँ गाडी
अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यातमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा, सम्पत्ति सुद्धिकरणद्वारा छानबीन !
डुबान निम्त्याउने भारतीय संरचनाबारे खुलेर बोल्दैन नेपाल, राज्यदेखि दलसम्मको मौनता !
विश्वकप छनोटः नेपाल समूह ‘बी’ मा